काननान तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चरमा गरिबी निवारणको नमूना - China Radio International
(GMT+08:00) 2017-07-17 18:05:23
चीनमा तिब्बत स्वायत्त प्रदेश बाहिर दसवटा तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चर रहेका छन्। दसवटा तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चरमध्ये कान्सु प्रान्तको दक्षिणी भेगमा रहेको काननान एउटा हो। काननान स्वायत्त तिब्बती प्रिफेक्चरको क्षेत्रफल 40 हजार 8 सय 98 किलोमिटर रहेको छ। यहाँको सरदर उचाइ समुद्री सतहभन्दा तीन हजार मिटर रहेको छ। यहाँको कूल जनसंख्या सात लाख तीस हजार रहेको छ। यहाँ 51.44 प्रतिशत तिब्बती जाति बसोबास गर्छन्। त्यसैगरी हान जाति 41.75 प्रतिशत हुइ जाति 6.43 प्रतिशत रहेका छन्। अन्य जातिमा थु, मंगोलियन लगायत 24 जातिका मानिसहरु यो प्रिफेक्चरमा बसोबास गर्छन्। प्रिफेक्चरको दरमुकाम हचुवो सहर हो। यस बाहेक यो प्रिफेक्चरमा7वटा काउन्टीहरु रहेका छन्।
काननानका स्थानीय किन गरिब भए?
उच्च भौगोलिक अवस्था र तिब्बती जातीय मानिसहरुको बाहुल्य रहेकाले काननानको मुख्य समस्या गरिबी थियो। अधिकांश तिब्बती जातिका मानिसहरु परम्परागत पशुपालन र कृषिमा आश्रित छन्। उच्च भौगोलिक अवस्थाका कारण यातायातको सुविधा नहुनाले विकासका पूर्वाधारहरु ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्न सकेका थिएनन्। त्यसमाथि वर्षको7महिना हिउँले ढाक्ने यो क्षेत्रको जीवनशैली अत्यन्त कठिन थियो। चौँरी र भेडा पाल्ने काममा मात्र बाँचेका काननानका तिब्बती जातिका मानिसहरु फिरन्ते जीवन जिउन बाध्य थिए। चौँरी र भेडा चराउनका लागि चरन क्षेत्र र घाँसे मैदानको खोजी गर्दै एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानु पर्ने अवस्थाले गर्दा घरमा बृद्धबृद्धा र केटाकेटी मात्र रहन्थे। उत्पादनमुखी उमेरका मानिस घरमा नरहेपछि बृद्धबृद्धा र केटाकेटीको अवस्था पनि कमजोर बन्ने गर्दथ्यो। एउटै टहरोमा पशुपालन र मानिससँगै बस्नु पर्ने बाध्यताले उनीहरुको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुन्थ्यो। ग्रामीण क्षेत्रमा न त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध थियो न त उचित यातायातको प्रवन्ध नै। बसोबासको क्षेत्रमा शौचालय र पिउने पानीको अभावले गर्दा त्यहाँका तिब्बती जातिले गरिबीसँगै स्वास्थ्य समस्यासँग पौँठेजोरी खेलिरहनु पर्दथ्यो।
चीन सरकारको गरिबी निवारण कार्यक्रम दुर्गम क्षेत्रमा पुग्न थालेपछि विस्तारै उनीहरुको जीवनशैली परिवर्तन हुन थाल्यो। कान्सु प्रान्त चीनको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्छ। चीनको पूर्वी भागभन्दा पश्चिमी भाग कम विकसित क्षेत्रमा पर्दछ। पछिल्लो समय चीनले पश्चिमी क्षेत्रको विकासमा उच्च ध्यान दिँदै पश्चिमतिर हेर भन्ने नीति ल्याएको छ। यही नीति अनुसार कान्सु प्रान्तको काननान क्षेत्रले काँचुली फेरेको छ। काननान तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चरले चाँडै नै विकासमा फड्को मारेको छ।
फिरन्ते जीवनशैली अपनाउने तिब्बती जातिका मानिसका लागि अहिले स्थायी आवासको व्यवस्था भएको छ। उनीहरुका घरहरु आधुनिक सुविधासम्पन्न छन्। पशुपालनभन्दा मानिसको बसोबास क्षेत्र छुट्टै रहेको छ। सफा र चिटिक्क परेका घरहरुमा इन्टरनेटको सुविधा पनि उपलब्ध छ। पहिले फोहोरी र घिनलाग्दा तिब्बती जातिका बसोबास क्षेत्रमा अहिले पर्यटकहरु पनि बस्न लालायित हुन्छन्। घरका कोठाहरु चिटिक्क परेका छन् भने सौर्य उर्जाको प्रयोग पनि गरिएको छ। उच्च भूभागमा हिउँदे ऋतुमा अत्यन्त चिसो हुनाले घरलाई न्यानो बनाउने घरायसी प्रविधिको प्रयोग गरिएको छ। पशुपालन र कृषिबाहेक विभिन्न वैकल्पिक पेशाप्रति तिब्बती जातिका मानिसलाई आकर्षित गर्न स्थानीय प्रिफेक्चर सरकार, प्रान्तीय सरकार र चीनको केन्द्रीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु अगाडि ल्याएका छन्। सीपमूलक तालिम, पर्यटकका लागि होमस्टे, स्वरोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार, चेतनामा वृद्धि आदि कारणले अहिले त्यहाँका बासिन्दाको आनीबानीमा परिवर्तन भएको छ।
आधुनिक आवास गृह र सफाइमा क्रान्ति
काननान तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चरमा अधिकांश तिब्बती जातिका मानिसहरु बसोबास गर्छन्। उनीहरुको चेतना स्तर निकै पछि परेको थियो। पशुपालन र कृषि पेशा गर्ने र वस्तु विनिमयबाट गुजारा चलाउने स्थानीय तिब्बती जातिका लागि सफाइको गुन्जायस थिएन। वर्षको एकचोटि नुहाउने र पशुहरुसँगै एउटै गोठमा बस्ने भएकाले सबैभन्दा ठूलो समस्या सफाइको थियो।
स्थानीय तिब्बती जातिका मानिसहरुमा सफाइको चेतना ल्याउनका लागि चीनको केन्द्रीय सरकार र स्थानीय प्रान्तीय सरकारले निकै मिहिनेत गरेको छ। मूल रुपमा उनीहरुका आनीबानीमा परिवर्तन ल्याउने कुरामा धेरै समय लागेको छ। सबैभन्दा पहिले चीन सरकारले उनीहरुलाई पशुपालन क्षेत्रभन्दा फरक क्षेत्रमा आवास क्षेत्र बनाएर बस्ने व्यवस्था गर्ने सोचाइ बनायो। यो सोचाइ सन् 1990 को दसकमै सुरु भएको थियो। सन् 2005 देखि निकै तिब्र रुपमा यो कार्यले गति लियो। काननानका विभिन्न काउन्टीमा स्थानीय तिब्बती जातिका गरिब परिवारका लागि आवास क्षेत्र निर्माण कार्य सन् 2017 सम्ममा लगभग पूरा भएको छ। विशेष गरी चीनको वर्तमान सरकारले गरिबी निवारणको लक्ष्य राखेर तीब्र गतिमा काम अगाडि बढाएपछि काननान तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चरका हजारौँ स्थानीय तिब्बतीहरुले सुबिधासम्मपन्न आवास क्षेत्रमा बस्न पाएका छन्।
गरिबी क्षेत्रमा निर्माण हुने आवासका लागि सरकारले 80 प्रतिशतसम्म अनुदान प्रदान गरेको छ। स्थानीय साधन र स्रोत प्रयोग भउकाले यस्ता आवास क्षेत्रहरु सुबिधा सम्पन्न भएर पनि त्यति महङ्गा भने छैनन्। सरकारी सहयोगमा निर्माण भएका घरहरुभित्र मात्र होइन बाहिर पनि उत्तिकै सफा भएका छन्।
स्थानीय सरकारले सफाइमा क्रान्ति ल्याएको छ। वातावरण संरक्षणका लागि घरभित्र र बाहिरको सफाइमा मात्र ध्यान दिइएको होइन बिकास निर्माणमा स्थानीय पर्यावरणलाई संरक्षण गर्ने नीति पनि लिइएको छ। तसर्थ सकेसम्म कम क्षति गराएर विकास निर्माण गर्ने र हरित विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै रुख र वन्य क्षेत्रको संरक्षण गरिने नीतिले सफाइ प्रतिको जनधारणामा व्यापक परिवर्तन आएको छ।
सांस्कृतिक संरक्षण र पर्यटन व्यवसाय
काननान तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चरमा गरिबी निवारणमा पर्यटन उद्योगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। तिब्बती जातिका आधुनिक घरहरुमा परम्परागत कला र बुट्टा कोरिएका छन्। सहरी जीवनबाट वाक्क लागेका पर्यटकका लागि केही दिनको बिदा मनाउन र तनाव घटाउन ती क्षेत्रमा गएर बस्न पाउनु निकै राम्रो अवसर सिर्जना भएको छ। पर्यटकका लागि पहिले ती क्षेत्रमा घुम्न जान निकै असुविधा थियो। सहरबाट निकै टाढाको दुरीमा रहेकाले एकैदिनमा गएर फर्कन सम्भव थिएन। बस्नका लागि पूर्वाधार र सुविधा थिएन। अहिले स्थानीय तिब्बतीहरुका घरले पर्यटकलाई लोभ्याउन थालेको छ।
प्राकृतिक मनोरम वातावरणको स्वाद लिँदै स्थानीय तिब्बती जातिका सुविधासम्पन्न घरमा बस्दा पर्यटकले पनि आनन्द र सुरक्षित महशुस गर्दछन्। बाससँगै पर्यटकले चौँरी गाईबाट उत्पादित दूध, घिउ, चिज जस्ता परिकार बाहेक स्थानीय जौबाट बनेका रोटी र रक्सीको स्वाद लिन पाउँछन्। सहरको तुलनामा सस्तो मूल्यमा परिवारसहित बस्ने व्यवस्था होमस्टेमा मिलाइएको छ। समूहगत रुपमा घुम्न जाने पर्यटकका लागि पनि बस्नलाई कुनै समस्या छैन। किनभने होमस्टेका रुपमा खुलेका पारिवारिक होटलहरु गाउँमा थुप्रै छन्। स्थानीय परिकार खाएर आनन्दसँग बसेका पर्यटकलाई नजिकैको सामुदायिक भवनमा साँझको समयमा तिब्बती कला संस्कृति पनि प्रदर्शन गरिन्छ। यसले पर्यटकको दिनभरिको थकाइ मेट्छ भने तिब्बती नाचगान र कलाको अवलोकनले उर्जा पनि प्रदान गर्दछ। परम्परागत तिब्बती पोशाकमा उपस्थित महिला तथा पुरुषहरुको मुस्कान सहितको स्वागतले पर्यटकलाई नलोभ्याउने कुरै हुँदैन। अत्यन्त मायालु, निश्छल, पाहुनालाई आदर सत्कार गर्न माहिर तिब्बती जातिका मानिसले पर्यटकलाई गीतद्वारा स्वागत गर्दै रक्सी खुवाउँदा कुन पर्यटक लोभिदैन होला र !
तिब्बती परम्परागत बाजागाजा सहित गीत र नृत्यले पर्यटकलाई आनन्द दिने काम मात्र गरेको छैन। यसले स्थानीय संस्कृतिको पनि संरक्षण गरेको छ। पर्यटन पेशाले स्थानीयको आयश्रोतमा वृद्धि भएको छ भने नयाँ पुस्तालाई आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण गर्दै उत्तराधिकारी बन्न पनि प्रोत्साहन गरेको छ। तिब्बती कला संस्कृतिलाई विश्वसामु चिनाउने कार्यले एकातिर तिब्बती जातिलाई गौरववोध गराएको छ भने अर्कातिर आफ्नो परम्परागत संस्कृतिप्रति नयाँ पुस्तामा जागरुकता थपेको छ।
सामूहिक आवास गृह संरचना निर्माण गर्दा बनाइएका ढोकाहरुमा कलात्मक सिर्जनाले समृद्धिको झलक दिएकव छ। आवास क्षेत्रभित्र सबै घरहरुमा हुनुपर्ने खुला भाग, भान्सा घर, पाहुना कोठा, शौचालय, बगैँचा आदि कुराले पर्यटकलाई बसौँ बसौँ बनाउँछ। आवास क्षेत्रभित्र रहेका होमस्टे, रेष्टुरेन्ट, स्थानीय उत्पादको बिक्रीकक्ष, सांस्कृतिक झलक प्रदर्शन कक्ष लगायतका कुराले पर्यटन व्यवसायलाई संस्थागत बनाएको छ। आवास क्षेत्रमा रहेका होमस्टेमा मात्र होइन बाहिरी चौरमा समेत पर्यटकलाई बस्नका लागि त्रिपालको व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय गरिबहरुलाई सरकारले त्रिपाल दिएपछि पर्यटकले ती त्रिपाल भाडामा प्रयोग गरेपछि थप आयश्रोत सिर्जना पनि भएको छ।
काननान तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चरमा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने क्रममा विभिन्न भागमा गुम्बाहरुको संरक्षण र संवर्द्धन गरिएको छ। गुम्बामा रहेका सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा उच्च ध्यान दिँदै तिब्बती परम्परागत धार्मिक कार्यमा संलग्न हुने र उनीहरुको पूजाआजालाई उच्च प्राथमिकता राख्ने कुरालाई पनि स्थानीय सरकारले ध्यान दिएको छ।
काननान तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चरमा रहेका पूर्वप्राथिमक तहदेखि प्राथमिक तथा माध्यमिक तहका विद्यालयहरुले पनि त्यस क्षेत्रको गरिबी निवारणमा भूमिका निर्वाह गरेका छन्। अल्पसंख्यक जातिका बालबच्चालाई आवाससहितको निःशुल्क शिक्षाको नीति चीन सरकारले लिएको छ। सोही नीति अनुसार काननान तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चरमा पनि तिब्बती भाषामै स्थानीय बालबच्चाले अध्ययन गर्न पाएका छन्।
विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुलाई कोरा सैद्धान्तिक शिक्षा मात्र नदिएर उनीहरुको रुचि अनुसार विभिन्न व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गरिन्छ। सानैदेखि आफ्नो रुचि अनुसार बालबच्चाले संगीत, नृत्य, कला, चित्रकारिता, मार्सल आर्ट्स, खेलकूद, व्यक्तित्व विकास, प्राविधिक शिक्षा लगायतका कुरामा छुट्टै समूहगत कक्षा प्रदान गर्नका लागि राम्रो पूर्वाधारको व्यवस्था गरिएको छ। विद्यालयमा तिब्बती भाषाबाहेक चिनियाँ भाषा र अंग्रेजी भाषाको शिक्षाबाट उनीहरुलाई आधुनिक समाजमा प्रतिस्पर्धी बनाउने काम पनि शिक्षाले गरेको छ। हरेक कक्षाकोठाभित्र आधुनिक र सुविधासम्पन्न प्रविधिहरु जडान गरिएका छन्। हस्तलेखनको कक्षा र चित्रकारिताको कक्षामा विद्यार्थीले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेको देख्दा उनीहरुको उज्जल भविष्य स्पष्ट देखिन्थ्यो।
अत्यन्त खुशीसाथ बालबच्चाले अतिरिक्त क्रियाकलापमा भाग लिएको र विद्यालय विदा हुने समयमा विद्यालय बाहिर अभिभावकहरु आफ्ना बालबच्चा लिन आउँदा देखिएको अनुहारको कान्तिले उनीहरुको खुशी पोखिएको स्पष्ट देखिन्थ्यो।
पहिले पहिले पशुपालनसँगै फिरन्ता जीवन जिउने बानी परेका स्थानीय तिब्बती जातिका नागरिककका लागि गरिबी निवारण कार्यक्रम अन्तर्गत सुविधासम्पन्न आवासगृह निर्माणभएपछि बालबच्चाहरुले निश्फिक्रीसँग शिक्षा ग्रहण गर्न पाएका छन्। तसर्थ अबको स्थानीय तिब्बती जातिका सन्ततीले अन्य उच्च स्तरका रोजगारी पाउने कुरामा कसैको दुइमत हुन सक्दैन।
काननान तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चरमा गरिबी निवारणका लागि स्वरोजगारले पनि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। आवास गृह निर्माण गर्दा स्थानीय सामग्री नै प्रयोग गरिएको छ। ढुङ्गा, माटो, इँटा, काठ अनि श्रम पनि स्थानीय नै प्रयोग भएको छ। स्थानीय सामग्रीसँगै श्रम पनि प्रयोग भएपछि आवासक्षेत्रमा घरहरु बनाउँदा स्थानीयले रोजगारी प्राप्त गरेका छन्।
पुरुषहरु निर्माण कार्यमा लागेका छन् भने महिलाहरुलाई विभिन्न सीपमुलक कामको तालिम दिलाइएकव छ। तिब्बती परम्परागत खानेकुरा पकाउने तालिमदेखि सांस्कृतिक क्षेत्रको तालिम पनि दिइएको छ। नाच्ने, गाउने, बाजा बजाउने, सार्वजनिक समारोहमा बोल्ने, आतिथ्य सत्कार गर्ने कुरामा तालिम दिएर महिलालाई स्वरोजगार बनाइएको छ। त्यति मात्र होइन रेष्टुरेन्ट संचलान गर्न, कुटिर उद्योग चलाउन लगायतका क्षेत्रमा सरकारले ऋण पनि उपलब्ध गराउने नीति लिएको छ।
चौँरी गाई र भेडाबाट उत्पादन हुने सामग्रीका लागि तालिम दिइन्छ। चौँरी गाईको दूधबाट विभिन्न परिकार बनाइन्छ। गोबरबाट गुँइठा बनाएर खाना पकाउने र घर न्यानो बनाउन प्रयोग गरिन्छ। चौँरीको रौँबाट राडीपाखी बनाइन्छ। मासुबाट सुकुटी बनाएर बजारमा बेच्ने गरिएको छ। हड्डीबाट घरायसी विभिन्न सामग्री बनाउन सकिन्छ। यसैगरी भेडाबाट पनि विभिन्न सामग्री बनाउनका लागि परम्परागत सीपमै आधुनिक प्रविधिको तालिम दिएर र बजार विस्तार गरेर स्वरोजगार बनाइएको छ।
काननान तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चरमा अधिक संख्यामा तिब्बती समुदायका मानिसहरु बसोबास गरेपनि त्यहाँ अन्य सम्प्रदायका मानिसहरु पनि बसोबास गरेका छन्। हु जातीय मुसलमान समुदाय र हान जातिका चिनियाँ समुदायहरु तिब्बती समुदायसँग अत्यन्त राम्रो घुलमिलमा एउटै क्षेत्रमा बसोबास गरेका छन्।
कुनै कुनै ठाउँमा घरका रङबाट तिब्बती जाति हुन् अथवा अन्य जाति हुन् भन्ने कुरा छुट्ट्याउन सकिन्छ भने कुनै ठाउँमा उही प्रकारका घरहरु रहेका छन्। काननानमा सबै समुदायबीचको सामाजिक सद्भाव उदाहरणीय रहेको छ। उदाहरणका रुपमा लामाङ्ग गुम्बालाई लिन सकिन्छ। यो गुम्बाले संचालन गर्ने स्वयंसेवी स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न कार्यक्रममा स्थानीय मुसलमान समुदायका मानिसहरु पनि सहभागी हुने गरेका छन्।
तिब्बती समुदायका मानिसले अन्य समुदायका मानिससँग बैबाहिक सम्बन्ध राख्ने र समाजमा मिलेर बस्ने भएकाले पनि काननानलाई सामाजिक सदभावको उच्च नमूनाका रुपमा लिन सकिन्छ।
चीनको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने कान्सु प्रान्त चीनका पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने अन्य प्रान्तको तुलनामा कम विकसित प्रान्त हो। त्यो प्रान्तको काननान तिब्बती स्वायत्त प्रिफेक्चर भौगोलिक र आर्थिक सामाजिक कारणबाट पछि परेको क्षेत्र हो। चीन सरकारले लिएको गरिबी निवारणका कार्यक्रम काननानमा अत्यन्त प्रभावकारी ढङ्गले लागू गरिएको छ। त्यहाँको जीवनशैली विगत एक दसकमै धेरै परिवर्तन आएको छ। काननानको एक साताको प्रत्यक्ष अवलोकनबाट स्थानीय तिब्बती जातिका व्यक्तिहरुको जीवनस्तर उच्च गतिमा सुधार भएको र आर्थिक रुपले सम्पन्न बन्न थालेको स्पष्ट देख्न पाइयो।
गरिब र गरिबीको परिभाषा अनुसार समय र स्थानको तुलना गर्न आवश्यक छ। कुन व्यक्ति गरिब हो र गरिब होइन भन्ने कुरा सो क्षेत्र र समयका अन्य व्यक्तिसँग तुलना गरेपछि मात्र थाहा पाइने कुरा हो। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडिका व्यक्तिको जीवनस्तर कस्तो थियो भनेर अहिलेका व्यक्तिसँग तुलना गरेर हुँदैन। त्यस्तै काननान र सांघाइका व्यक्ति को धनी र को गरिब भनेर तुलना गरेर पनि हुँदैन। समग्रमा भन्नुपर्दा विगत एक दसकदेखि काननानका स्थानीय तिब्बती जातिको जीवनस्तर अपत्यारिलो गतिमा अगाडि बढेको छ। उनीहरु अहिले सम्पन्न नागरिकको दाँजोमा पुग्न थालेका छन्।